जेलभित्र पल शाहले भेटे हितैसी मित्र, को हुन् उनि ? — Sanchar Kendra
जेलभित्र पल शाहले भेटे हितैसी मित्र, को हुन् उनि ?
काठमाडौँ। नावालिग किशोरीलाई करणी गरेको आरोपमा अभिनेता पल शाह अहिले दमौलीस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा छन् । प्रहरीमा जाहेरी केहि दिन फरार रहि पक्राउ परेका शाहलाई आइतबार दिउँसोदेखि हिरासतमा छन् । अदालतबाट एक हप्लाको म्याद थप गर्दै प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
६ दिनयता पल शाह हिरासतमा छन्। उनी बसेको पुरुष थुनुवा थुनिने हिरासतमा अहिले थप तीनजना थुनुवा छन्। ति ३ जना थुनुवा मध्ये १ जना अहिले पलको साथी भएका छन्।
प्रहरीका अनुसार यो मुद्दामा पल र पीडितको बयान अनुसन्धानको प्रमुख आधार त हुन्छ नै, सँगसँगै घटना अलि पुरानो भएकाले प्रहरीले परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई नै अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाउनेछ।
पलले नाबालिग किशोरीसँग यौसनजसन्य गतिविधि स्वीकार गरेको अडियोलाई पनि प्रहरीले ल्याबमा जाँच गरेर प्रमाणका रुपमा पेश गर्ने तयारी छ।
त्यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले घटना भएको स्थान, त्यहाँ उपस्थित भएका मान्छेसँग पनि बयान लिइरहेको छ।
सजाय के हुन सक्छ
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ अनुसार १८ वर्ष नपुगेकी बालिकालाई सहमतिमा पनि यौ’न सम्पर्क गर्न मिल्दैन।
यसरी यौ’न क्रियाकलाप गरेको देखिएमा जसबरसजसस्ती कसरणी मानिने व्यवस्था छ। दफा २१९ (२) मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै पनि बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जसवसर्जस्ती कसरणी गरेको मानिन्छ।’
अधिवक्ता अरुण पौड्यालका अनुसार १६ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेरकी बालिकासँग यौसन सम्बन्ध राखेमा १० देखि १२ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। ‘त्यसैले पलले पीडित किशोरीमाथि शारीरिक ससम्पसर्क राखेको प्रमाणित भयो भने उनीमाथि कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार यो सजाय हुनसक्छ,’ उनले भने।